पोखराबाट जापान आउन ६३ जनाको लाइन, तर इन्स्टिच्युट नै नक्कली ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
पोखराबाट जापान आउन ६३ जनाको लाइन, तर इन्स्टिच्युट नै नक्कली !
जापान लगिदिने भन्दै अन्तरवार्ता लिईरहेका दुई जनालाई पोखराको पृथ्वीचोकबाट पक्राउ गरिएको छ । ठगी गर्न लागेको सूचना पाएपछि कास्की प्रहरीको टोलिले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
दर्ता नै नभएको ‘एभेन्चर ह्युमन रिसोर्स’ नामक संस्थाबाट जापान पठाउने भन्दै अन्तरवार्ता लिँदै गरेका स्याङजा आँधीखोलाका ५१ बर्षिय भगवान खड्का र कास्की रुपा गाउँपालिकाका निरज खनाल पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरुले ६३ जनालाई जापान पठाउने भनेर अन्तरबार्ता लिएका थिए । पहिले विद्यार्थी भिसाबाट फालिएकाहरु वर्किङ भिसामा जानका लागि सम्पर्कमा आएका थिए । अन्र्तबार्ता गर्नु पुर्व चाहिने पुर्व स्विकृति तथा बैदेशिक रोजगार विभागबाट लिनुपर्ने स्विकृति पत्र पनि नभएको बताइएको छ । जापानका लागि वर्किङ्ग भिसा भनिए पनि डिमाण्ड लेटर विना नै उनीहरुले अन्र्तवार्ताका लागि बोलाएका थिए ।
आकर्षक तलबको प्रलोभनमा परी उनीहरु सो संस्थामा पुगेका थिए । जाापान लैजाने भन्दै भाषा तथा पासपोर्ट बनाइ फाइनल अन्र्तबार्ताका लागि उनीहरुलाई बोलाइएको थियो ।
एकमहिना अघि संस्था दर्ता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन र श्रम कार्यालय सहितको अनुगमन टोलिले मेनपावर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । तर केही दिनपछि ताला खोलेर पहिले झैं गरि काम गरिरहेका थिए । बैदेशिक रोजगार बिभागमा पोखराका लागि बैदेशिक रोजगारका २ वटा शाखा र २५ वटा प्रतिनिधी कार्यलय मात्रै दर्ता रहेको छ ।
मुख्य मान्छे बाहिर भएकोले झिकाउन निर्देशन दिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धान चलिरहेकोले बैदेशिक रोजगारी, किर्ते वा ठगी मुद्धामा कारबाही अघि बढ्ने बताईएको छ । ‘मुख्य मान्छे पोखरा छैन । उनीहरुको बयान अनुसार मुख्य ब्यक्तिलाई झिकाएका छौं, कास्की प्रहरी प्रबक्ता रवीन्द्रमान गुरुङले भने–अनुसन्धान पछि मात्रै कारबाहीको बारेमा बोल्न मिल्छ ।’
सबैजनाले जापानी भाषा सिकिसकेका छन् । उनीहरु ५ दिनदेखि पोखरा बसेको बताउँछन् । ‘५ दिनदेखि कहिले अन्तरवार्ता कहिले के भनेर झुलाईरहे । खाँदा बस्दा २०-२५ हजार खर्च भैसक्यो, उनीहरु भन्छन्–अहिले यता न उता भैयो ।’ पीडितहरुका अनुसार मेनपावरवालाले पैसा चाहीँ उठाएका छैनन् । पोखराबाट संचालित विग एफएमले आफ्नो अनलाइन समाचारमा यो खबर लेखेको छ ।